Fri, Jul 10, 2020 at 2:51pm
अत्याधिक बढेको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर सर्लाहीमा थप दुईजनाको मृत्यु
काठमाडौं, पौष २७ । सर्लाहीमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । बसबरिया गाँउपालिका–१ मानपुरकी ६५ वर्षीय सीयादेवी यादव र चक्रघट्टा गाँउपालिका–४ सुन्दरपुरका ६२ वर्षीय महमद हुसेन रहेको चिसोका कारण मृत्यु भएको हो । दुवैजनाको गएराति सुतेकै ठाउँमा चिसोले कठ्याग्रिंएर मृत्यु भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दुवैजनाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मलंगवामा राखिएको प्रहरीले जानएको छ । यसअघि हिजो पनि चिसोले..
कञ्चनपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु
भिमदत्त, पुस २७ । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका–१० मा आज विहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा २५ वर्षीय भारतीय नागरिक धिरज आर्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परि गम्भिर घाइते भएका आर्यको उपचारका क्रमा महाकाली अञ्चल अस्पतालमा आज विहान साढे १ बजे मृत्यु भएको हो । आर्यले चलाएको अनटेष्ट लेखिएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा पछाडि सवार ब्यक्ति भने..
राजधानीको बालाजुमा बसको ढोकाबाट खसेर एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं, पुस २४। काठमाडौं बालाजु नजिकै बसको ढोकाबाट खसेर एक जनाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा बानियाटारका आशिष रिजाल रहेका छन् । सोमबार बिहान बा ३ ख ६६ ९५ नम्बरको बसको ढोकाबाट खसेर घाइते भएका रिजालको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौंको नयाँबजारमा बसको ठक्करबाट घाइते भएका गोरखाका आइसिङ गुरुङको ज्यान गएको छ । गुरुङको..
कसले दियो सलमान खानलाई अदालतमै ज्यान मार्ने धम्की ? थाहा पाउनुस्
एजेन्सी । भारतको पंजाब, हरियाणा र राजस्थान क्षेत्रका कुख्यात डन लरेन्स विश्नोइले बलिउड स्टार सलमान खानलाई ज्याद मार्ने धम्की दिएको खबरले अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा चर्चा पाएको छ । लरेन्सले जेल जाँदै गर्दा अहिले आफूले केही नगरेको तर, अब सलमानलाई जोधपुर अदालत परीसरमै मार्ने बताएपछि त्यसले छुट्टै तरंग पैदा गरेको हो । राजस्थानको जोधपुर अदालतबाट जेल जाँदै गर्दा एक मिडियाकर्मीले उनको अगाडि..
शीतलहरसँगै बढेको चिसोले कठ्याङ्गिएर सिरहामा तीन जनाको मृत्यु
सिरहा, पौष २३ । दुई सातादेखि लगातार चलेको शीतलहरका कारण सिरहामा एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । शीतलहरसँगै बढेको जाडोका कारण कठाङ्ग्रिएर तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–७ कसहाका ५५ वर्षीय रामरतन महतो र गोलबजार नगरपालिका ४ का शम्भु साहका ६ वर्षीय छोरा लभकुमार साहको आज विहान मृत्यु भएको हो । गोलबजार २ लालपुरका ७०..
रुपन्देहीको देवदहमा फर्निचर व्यवसायीको गोली हानी हत्या
२१ पुस, बुटवल । रुपन्देहीको देबदहमा एक जना फर्निचर व्यवसायीको गोली हानी हत्या भएको छ । अज्ञात समूहले स्थानीय बलु भनिने बसन्त पौडेलमाथि गोली हानेर फरार भएको थियो । टाउकोमा गोली लागेका पौडेलको बुटवलस्थित लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलमा आएको समूहले व्यावसायी पौडेलको टाउकोमा गोली हानेर स्थानीय रोहिणी खोलातर्फ भागेको बताइएको छ । ..
दुई थान पेस्तोलसहित एक व्यक्ति कोटेश्वरबाट पक्राउ
काठमाडौँ, २० पुस : प्रहरीले कोटेश्वरबाट दुईवटा पेस्तोलसहित एकजनालाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा खोटाङ घर भई सुनसरीको इटहरी बस्ने वर्ष २६ को सुभाष कार्की रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रवक्ता रामदत्त जोशीले जानकारी दिए । प्रहरीले कोटेश्वरस्थित महादेवस्थान मार्ग, पेरिसडाँडामा रहेको न्यू सुनकोशी गेष्ट हाउसको कोठा नं १०४ मा बसेको अवस्थामा उनको साथबाट एक थान रिभल्वर र त्यसको दुई..
कलैयामा भयो कुखुराको खोरमा आगलागी
कलैया, १८ पुस । बारा जिल्ला फेरा गाउँपालिका वडा नं ७ मा गए राति १ बजे कुखुराको खोरमा आगलागी हुँदा करिब रु ४५ हजार बराबरको क्षति भएको छ । फेरा–९ पुरैनिया गाउँ बस्ने इब्राहिम महम्मद ठकुराईको कुखुरापालन गरिएको खोरमा अचानक विद्युत् प्रवाह बढी भई आगलागी हुँदा कुखुराका करिब ७०० चल्ला नष्ट हुनुका साथै पाँच बोरा दाना, साइकलसमेत नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले..
काठमाडौँ, पुस १४। सुन्दा पनिअचम्म लाग्न सक्छ, निजामति कर्मचारीले सरकार आफैँले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् सरकारले केही बर्षदेखि निजामति कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन् ।राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरणमात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने..
राजधानी गौशलाको एक होटलमा भारतीय नागरिकको हत्या
काठमाडौं पौष १३ । काठमाडौंको गौशालामा रहेको पशुपति भिजनस्थित आमादब्लम होटलमा एक भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ । गएराति होटल प्रशासन र आदित्य गुरुङबीच झगडापछि कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका गुरुङको उपचारको क्रममा सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको थियो । मदिरा सेवनबाट उत्पन्न विवादपछि होटल प्रशासन र गुरुङबीच झगडा भएको प्रहरीको महानगरीय प्रहरी बृत गौशालाका डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताउनु बताए..
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु, एक घाइते
सर्लाही, पुस १२ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–२ सिस्वामा बुधबार बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एक जना घाइते भएका छन् । हरिपुरबाट लालबन्दीतर्फ आउन लागेको ना ४८ प १४०३ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई नहरको कल्भर्टमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक हरिपुर नगरपालिका–९ ढाप टोलका २० वर्षका अनिल साहको मृत्यु भएको छ । उहाँको मोडेल अस्पताल..
सशस्त्र प्रहरीको प्रधान कार्यालयमै आगो लगाउने प्रहरी पक्राउ
काठमाडौं, पुस ११ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा आगो लगाउने एकजना प्रहरी पक्राउ परेका छन् । गएको पुस ४ गते राति सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक परिसर भित्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको प्याराफिटमुनि रहेको स्टोरमा आगलागी भएको थियो । आगलागीमा स्टोरभित्र रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण कागजातहरु तथा जिन्सी सामानहरु जलेर क्षति भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेका त्यही शाखामा कार्यरत सशस्त्र..
मैतीदेवीमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते, ४ जनाको अवस्था गम्भीर
काठमाडौँ, ११ पुस । आज बिहान मैतीदेवीमा भएको बस दुर्घटनामा १७ जना घाइते भएका छन् । बा २ ख ८७३३ नम्बरको सिटी यातायातको बस कपनबाट कालिमाटी जाँदैगर्दा मैतीदेवी पुलनजिकै बिजुलीको खम्बामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको अनुसार घाइतेमध्ये ८ जनालाई नर्भिक अस्पताल र ९ जनालाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर भर्ना गरिएको छ । घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ..
मापसे गरेर सवारी चलाउने दुई सय पैँतालिस चालक पक्राउ
काठमाडौँ, १० पुस । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले क्रिसमसको अवसर पारेर मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने २४५ चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । महाशाखाले इसाई धर्मावलम्बीको महान् चाड क्रिसमसको अवसर पारेर आइतबार बेलुका गरेको विशेष जाँचका क्रममा ती चालकलाई नियन्त्रणमा लिइ कारबाही गरेको हो । महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले क्रिसमसको अवसर पारेर मापसे सेवन गरी जथाभावी सवारी साधन चलाउने र दुर्घटना हुने भन्दै..
पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु
कास्की, पुस ९। कास्कीको पोखरामा आज विहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय १५ वर्षीय सबिन बास्तोला रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१९ पात्लेखेतमा बिहान ग ७ प ७९७५ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलका पछाडि सवार बास्तोलाको मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकल पल्टिएर उछ्टिएका बास्तोलालाई ना ६ ख ९००५ नम्बरको ट्रिपरले ठक्कर दिएको थियो । घाइते..
धादिङको सिर्वानीमा पुरानो सिलिण्डर विस्फोट हुँदा एक घर ध्वस्त
धादिङ, पुस ७ । लापरवाहीपूर्वक गाउँमा बिक्री गरेको ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा एउटा घर ध्वस्त भएको छ । गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिर्वानीमा बाबुराम तिमल्सिनाको घरमा बजारबाट किनेर लगेको नमस्ते ग्यासको सिलिण्डर घर भित्र विस्फोट भएको र घर ध्वस्त भएको धादिङबाट सिताराम अधिकारीले जानकारी दिए । ग्यास उद्योगले बजारमा ल्याएको पुरानो सिलिण्डर किनेर लगेलगत्तै विस्फोट भएकोले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने घरधनी तिमल्सिनाले बताए..
सिरहा मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट, तीनजना घाइते
लहान, ७ पुस । सदरमुकाम सिरहास्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आज दिउँसो बम विस्फोट हुँदा तीनजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा मालपोत कार्यालय अगाडि लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएका सिरहा नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय पवन पासवान, सेवाग्राही सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वरका राजकुमार पासवान र सोही ठाउँका रोशन पासवान रहेको सिरहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार भेटवालले जानकारी दिए । बमको छर्रा लागेर गम्भीर घाइते भएका तीनैजनाको..
वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा अज्ञात समूहद्वारा विद्यार्थीमाथि छुरा प्रहार
काठमाडौं पौष ७ । वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा आज विहान अज्ञात समूहले एक विद्यार्थीमाथि छुरा प्रहार गरेको छ । बिहान ५ जनाको अज्ञात समूहले बीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी रोशन यादवमाथि छुरा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यादवको छाती र हातमा छुरा प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयास भएको विद्यार्थी फोरमका नेता निखिल बर्णवालले जानकारी दिए । वीरगञ्ज १३ राधेमाईका घाइते यादवको नारायणी..
खुल्लेआम घुस खाने ‘इन्सपेक्टर’ सहित अन्य ७ प्रहरी निलम्बित
बुटवल, पुस ७ । घुस लिएको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत इन्सपेक्टर मधु नेपालसहित अन्य सात जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारीसमा उनीहरुलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । इन्सपेक्टर नेपालले केही बालकलाई मुद्दामा फसाइदिने भन्दै ७० हजार लिएका थिए । त्यस्तै, ठूलो परिमाणको गाँजासहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरुसँग ५० हजार रुपैयाँ लिएर उनले उन्मुक्ति दिएको उनीमाथि आरोप..
चितवनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो, दैनिक दुईदेखि तीनवटा उजुरी
चितवन, ६ पुस । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । जिल्लामा गत वर्ष दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकामा यस वर्षको चार महिनामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका घटना घटाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय आएर फेसबुक, ट्विटर, इमो,..
मोरङमा हात्तीले दुःख दिन थालेपछि रातभर जाग्राम
उर्लाबारी, मोरङ, ६ पुस । मोरङको उर्लाबारी, मिक्लाजुङ, सुन्दरहरैँचा र बेलबारी क्षेत्रमा जंगली हात्तीले दुःख दिन थालेपछि स्थानीयवासी रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएका छन् । केही दिनयता हात्ती गाउँ पसेर वितण्डा मच्चाउन थालेपछि सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आतंकित बनेका छन् । केहीदिनअघि मात्रै बस्तीमा पसेको हात्तीले घर भत्काइदिएपछि त्रासका साथ रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उर्लाबारी–१ का कृष्णप्रसाद पोख्रेलले बताए । आहाराका लागि..
सुपर ग्यास उद्योगमा लागेको आगलागी करिब ९ घण्टा पछि नियन्त्रणमा
काठमाडौँ, ५ पुस । पर्सा जिल्लाको सुपर ग्यास उद्योग प्रालिमा आज बिहान लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ । संघको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उहाँले त्यस घटनामा परी दुईजनाको मृत्यु भएको र अरू क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेकाले थप जानकारी आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । चालकले गाडी स्टार्ट गर्ने क्रममा उत्पन्न झिल्कोबाट आगो सल्किन..
काठमाडौं ५ पुस । काठमाडौंको टोखास्थित झोरको जंगलमा बुधबार दिउँसो गोली चलेको छ । गोली लागेर एक जना महिला घाइते भएकी छिन् । घाइते हुनेमा स्थानीय ३५ वर्षीया दुर्गा दुलाल रहेकी छिन् । नेपाल प्रहरीका एसपी रामदत्त जोशीले दिएको जानकारी अनुसार उनी घाँस काट्न गएको वेला गोली लागेको थियो । स्थानीय युवकहरुले शिकार गर्ने क्रममा गोली चलाएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भीक अनुमान छ..
ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा २ जनाको मृत्यु, आगो अझै नियन्त्रण बाहिर
पर्सा, पुस ५ । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२२ मा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा दुईजनाको जलेर मृत्यु भएको छ । आगो निभाउन पुगेका अग्नि नियन्त्रक मधुसुदन मिश्र र दमकलका चालक यादव अधिकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीमा परी अन्य ३ जना घाइते भएका छन् । आगो निभाउन जाँदा जलेर घाइते भएका वीरगंज वारुणयन्त्रका कर्मचारी भोजपुरका सञ्जीव नेपाल र अर्का वीरगञ्ज..
सोलुखुम्बु बागमको एक घरमा आगलागी हुँदा ७० लाखको क्षति
सल्लेरी, २ पुस । सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका– ८ बागमको एक घरमा आगलागी हुँदा करिब रु ७० लाख बराबरको क्षति भएकोे छ । स्थानीय तेण्डी शेर्पाको घरमा शनिबार ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । आगलागीबाट रु एक लाख ५० हजार नगदसहित शेर्पाको ढुङ्गा माटोले बनेको तीनतले घर, घरमा भएको सुनचाँदी कासा तामालगायत सम्पूर्ण धनमाल जलेर नष्ट..
अवैध रुपमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेका १० ट्याक्टर नियन्त्रणमा
दाङ, मंसिर २९ । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका पातुखोला र भमके खोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी संकलन गरिरहेका १० वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का नभएको भमकेखोला र पातुखोलाको तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका ती ट्याक्टरहरुलाई गिट्टी उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको डि एस पी प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ गरिएकाहरु माथि थप अनुसन्धान गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइने..
सिलिण्डर ग्यास पड्कँदा आगलागी, १२ लाख बढीको क्षति
झापा, मंसिर २८ । झापाको काँकडभिट्टा उच्च मावि परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा सिलिण्डर ग्यास पड्केर आगलागी हुँदा रु १२ लाखभन्दा बढीको मालसमानको क्षति भएको छ । मेचीनगर–६ का नारायण विष्टले सञ्चालन गरेको क्यान्टिनमा आज बिहान ५ बजे रेगुलेटरबाट ग्यास चुहिएर आगलागी भएको काँकडभिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक टंक भट्टराईले बताए । आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति नभए पनि टिनको छानो रहेको क्यान्टिन पूरै जलेको..
धादिङको गजुरीमा ३० किलो गाँजासहित दुईजना पक्राउ
धादिङ, मंसिर २८ । धादिङको गजुरी गाउँपालिका–१ स्थित गजुरी बजारबाट आज विहान ३० केजी गाँजासहित दुई पक्राउ परेका छन । काठमाडौंबाट विरगंजतर्फ जाँदै गरेको ना२ख ७३११ नम्बरको ट्रकमा चेकजाँच गर्ने क्रममा गाँजा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जानकारी दिएको छ । पक्राउ पर्नेमा ट्रकका चालक पर्सा कल्याणपुरका हृदयनन्दप्रसाद यादव र विरगजंका आकाश सुनार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सुराकीको आधारमा चेकजाँच गर्ने क्रममा..
आगलागीमा परी इलाममा एक महिलाको मृत्यु
इलाम, २८ मंसिर । इलाम नगरपालिका–४ बिब्ल्याँटेस्थित एक घरमा गएराति आगलागीमा परी घाइते भएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बिब्ल्याँटेका भवीन्द्र नेपालको घरमा राति २ बजे आगलागी हुँदा उनकी श्रीमती ३० वर्षीया पवित्रा नेपाल जलेर घाइते भएकी थिइन् । इलाम अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि झापातर्फ लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । रातको समयमा घरमा बालिएको..
पाल्पामा बसले किच्दा नाबालकको मृत्यु, बस चालक प्रहरी नियन्त्रणमा
पाल्पा, २७ मंसिर । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–६ हेक्लाङ्गमा बसले किच्दा बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हेक्लाङ्गका १६ महिनाका बालक अमृत सारु रहेका छन् । सारुका हजुरबुबा बसमा चढ्न खोज्दा बालकले हजुरबुबालाई पछ्याउँदै गाडीतर्फ आउने क्रममा किचिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हजुरबुवाले तरकारी लोड गर्दैगर्दा बसको अर्को पटृीबाट बालक पछयाउँदै आएकाले उनले नदेखेको र उनलाई हेर्ने ५-६ बर्षका दाई साथीसंग..
Results 1952: You are at page 60 of 66